Loopfuse: Qalabaynta Suuqgeynta B2B ee SMBs | Martech Zone
Loopfuse: Qalabaynta Suuq B2B ee SMBs
Talaado, Oktoobar 8, 2013 Isniin, Oktoobar 7, 2013 Douglas Karr
LoopFuse waxay bixisaa ganacsi ganacsi (B2B) madal otomaatig ah oo suuq geyn ah oo kuu sheegaysa qofka booqanaya websaydhkaaga, kaa caawinaya inaad soo qabato macluumaadkooda, u dirto hoggaanka korinta e-mayl, dhibcaha fursadaha ugu fiican, oo aad ku wada darto nidaamka Maareynta Xiriirka Macaamiisha (CRM) warbixin sare.
Mar alla markii aad meesha joogto, waxaad arki doontaa tilmaamo tayo leh oo aad u tayo badan, wareegyada iibka oo gaagaaban, suuqgeynta iyo waxtarka iibka oo kordhay, iyo otomatiga hal mar oo hawlo gacanta ah iyo kuwa soo noqnoqda ah Marka la soo koobo, waxaan kaa caawinaynaa inaad dhakhso u soo saarto dakhli. LoopFuse OneView Tilmaamaha Guud:
Dashboorrada Suuqgeynta - Dashboodyadu waxay bixiyaan aragti dhab ah, daqiiqad-daqiiqad ah dhammaan howlahaaga iibinta iyo suuqgeynta, illaa faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan taabashada rajooyinka, shirkadaha, CRM Leads, iyo CRM Contacts. Laga soo bilaabo Suuqgeynta Email-ka oo furan oo guji, illaa tirada Hoggaaminta lagu abuuray saacaddii gudaha CRM-gaaga, shaashaddooda dhammaantood way wada leeyihiin.
Email Marketing - Awoodaha Suuqgeynta Emailka ee 'OneView' waxay awood kuu siineysaa inaad abuurto ololeyaal emayl aad u muuqda, oo lagu shaqsiyeeyo macluumaadka xiriiriyaha qaataha. Awood badan Analytics iyo warbixintu waxay kaa caawineysaa inaad si fiican u hagaajiso ololeyaasha emaylka ee socda.
Suuq Inbound - Falanqee oo la soco makiinadaha raadinta, ereyada muhiimka ah, tixraacyada boggaga iyo taraafikada tooska ah ee soo gaaraya goobtaada. Soo ogow waxa bogagga suuqgeynta suuqgeynta iyo hantida ay ugu qiimo badan yihiin booqdayaasha iyo akhristayaasha bartaada.
Qabsashada Hogaanka - Qalabaynta Suuqgeynta waxay ka bilaabataa Lead. Foomamka Qabashada Macdanta "Lead Capture Forms" waxay si isdaba-joog ah ugu dhexgalaan foomamyada websaydhkaaga hadda jira, iyagoo kuu oggolaanaya inaad adigu otomatig u noqoto geeddi-socodka qabashada, ku-shubidda (CRM-kaaga), iyo u-hoggaansanaanta u-qalmitaanka.
Kordhinta Lead - Lead Nurturing wuxuu si buuxda otomaatig uga dhigayaa geeddi-socodka u-qalmitaanka u-hoggaansanaanta ama ilaalinta dareenka macaamiishaada jira. Mawduuca 'OneView's Lead Nurturing module' wuxuu awood u leeyahay inuu falanqeeyo goob kasta oo taabasho leh rajo gaar ah; waxqabadka websaydhka, macluumaadka xiriirka, waxqabadka emaylka, iyo xitaa la-qabsiga waqtiga-dhabta ah ee CRM-gaaga.
Isdhexgalka CRM - Isdhexgalka labada-geesood ah ee CRM-gaagu wuxuu bixiyaa hanaan si buuxda otomaatig u ah qabashada, u qalmidda, beddelidda, iyo cabbiraadda Hugaamiyaasha, Xiriirrada, iyo Fursadaha. Faalooyin dheeri ah ayaa kordhiya isdhexgalka CRM, iyaga oo siinaya shaqaalaha iibka macluumaadka waqtiga-dhabta ah ee hogaamiye kasta.
Gooldhalinta hogaanka - LoopFuse OneView wuxuu u oggolaanayaa suuqleyda inay si dhakhso leh u abuuraan xeerar xoog leh oo dhibcaha hoggaaminta ah iyadoo la adeegsanayo saaxirrada dhibcaha hoggaanka. Ma jiro koodh adag, ama adag in la ogaado qaabeynta, si ay suuqyadu u soo galaan una ilaaliyaan xeerarka si dhakhso leh.
Maareynta Lead - Iyada oo la raacayo dhammaan howlaha booqdayaasha iyo in la dhexgeliyo macluumaadka diiwaangelinta, waxaan ku dhiirrigelineynaa suuqleyda in ay u kala qaybiyaan kooxo kala duwan oo leh hanti isku mid ah ama astaamaha waxqabadka. Barnaamijyada iswada, ururadu waxay sifiican u maareyn karaan jawaabaha laga filayo halka isla mar ahaantaana diirada la saarayo iibka qiimaha ugu sareeya.
Warbixinnada Suuqgeynta - Warbixinno qoto dheer oo loogu talagalay inay ka caawiso suuqleyda sidii loo dejin lahaa aragti wax ku ool ah oo ku saabsan jiilkooda hoggaamineed, qabashada iyo habraaca u qalmidda. Module-warbixineedku wuxuu daboolayaa dhinac kasta oo suuq-geyn ah dhammaan macluumaadkaaga, oo ay ku jiraan: rajooyinka, degelka Analytics, booqashada shirkadaha, waxqabadka emaylka, iyo waxqabadyada CRM.
Suuqgeynta Bulshada - Warbaahinta bulshada waa hab fiican oo lagu garto laguna xiro rajooyinka. Qaybta khiyaanada leh waa in la kala saaro signalka iyo buuqa si loo helo fursadaha ugu fiican. Nearstream waa cusub oo waxay kaa caawinaysaa inaad hesho calaamadaha iibsiga.
Is-dhexgalka Qeybta Saddexaad - LoopFuse OneView wuxuu si isdaba-joog ah ula midoobayaa Nidaamyada Maareynta Mawduucyada caanka ah, Miisaska Caawinta, CRMs, iyo Tilmaamaha Ganacsiga ee Saddexaad, kaliya in la magacaabo dhowr.
OneView API - LoopFuse waxay bixisaa Webservice API helitaanka iyo gelinta macluumaadka galkaaga LoopFuse OneView barnaamij ahaan. Maaddaama dhammaan adeegsadeena-isdhexgalka lagu dhisay Webservice API, inta badan shaqooyinka laga heli karo dhex-dhexaadiyaha isticmaale-wadaha ayaa loo fududeyn karaa inaad dhex gasho.
Tags: APIisdhexgalka crmdrupalEmail Marketingmarketing inboundqabashada hogaankamaamulida hogaankahagaajinta barbaarintadhibcaha hogaankaloopfuseloopfuse oneviewsuuq geynta suuq geyntasuuqgeynta suuqgeyntawarbixinnada suuqgeyntahal aragtiiibinsuuq-geynta suuqaWordPresszendesk
Falcon Bulsho: Maareynta Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiga